दुर्गा दुलाल | २०७५ मङ्सिर ८ शनिबार | Saturday, November 24, 2018 ०९:२१:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं– व्यापारी दीपककुमार मल्होत्रा नेपालका लागि सामसुङ मोबाइलको आधिकारीक बिक्रेता कम्पनीका मालिक हुन्। उनको कम्पनी आइएमएस वर्ल्ड प्रालिले नेपालमा सामसुङ कम्पनीको मोबाइल सेट आयात गर्दै आएको छ।
तर, मल्होत्राले आफन्तको नाममा दर्ता भएका थप तीन कम्पनीमार्फत मोबाइल आयात गरेर निर्यात गरेको खुलासा भएको छ।
मल्होत्राले आइएमएस वर्ल्डसहित इन्टिग्रेटेड मोबिलिटी सोलुसन्स प्रालिमार्फत मोबाइल आयात र हिमालयन इलेक्ट्रोनिक्स प्रालिमार्फत निर्यात भएको देखाएका छन्। यी दुवै कम्पनी मल्होत्राले शतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्ने उद्देश्यले खडा गरेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ।
यसरी आयात गरेको मोबाइल शतप्रतिशत भ्याट रकम फिर्ता लिने उद्देश्यले पुन: निर्यात गर्ने गरेको खुलासा भएको हो।
सरकारले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न कच्चा पदार्थमा लागेको भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, मल्होत्राले यही प्राबधानलाई टेकेर अायात गरेको मोबाइल अर्को देशमा निर्यात गरेर भ्याट फिर्ता लिने गरेका छन्। ऐन अनुसार कुनै पनि सामान आयात गरी निर्यात गर्दा भ्याट फिर्ताका लागि तेस्रो कम्पनी हुनुपर्नेछ। तर, मल्होत्राले आफै‌ आयात र निर्यात गर्ने गरेका हुन्।
मल्होत्राले निर्यात गरेको भनी दाबी गरेका मोबाइल सेटहरु चीन, भियतनाम लगायतका देशमा उत्पादन भएका हुन्। उक्त मोबाइल सेटहरु भारतको सामसुङ इन्डिया इलेक्ट्रोनिक्स प्रालिबाट आयात गरी युएईमा रहेको कम्पनी कृष्ण इन्टरनेसनल एफजेडई दुबईलाई बिक्री गर्ने गरेको देखाएका छन्। ती सेट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमार्फत हवाई माध्यमबाट बिक्री गर्ने गरेको मल्होत्राले देखाएका छन्।
याे विवाद सर्वाेच्च अदालत पुगिसकेकाे छ। तर सर्वाेच्चले मलहाेत्राकै पक्षमा अन्तरिम अादेश सुनाएकाे छ। सरकारले उक्त अादेश खारेजीका लागि सर्वाेच्चमा निवेदन पनि दर्ता गरिसकेकाे छ।
यसरी गरियो राज्यकोषको दोहन
_x000D_ मल्होत्राले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३, २०७३/०७४ मा यही प्रक्रियाबाट शतप्रतिशत भ्याट फिर्ता लिँदै आएका थिए। त्यसैगरी २०७४/०७५ का लागि पनि उनले सोही प्रक्रिया अनुसार २०७४ साउनदेखि चैतसम्म मोबाइल निर्यात गरेको देखाएका छन्। यसरी निर्यात गरेको भनिएको मोबाइल मल्होत्राको कम्पनी आइएमएस वर्ल्ड र इन्टिग्रेटेड मोबिलिटी सोलुसन्सबाट हिमालयन इलेक्ट्रोनिक्सले आन्तरिक खरिद गरेको देखाइएको छ।
यसरी आन्तरिक खरिद गरे बापतको ११ करोड ४२ लाख २८ हजार १ सय ३८ रुपैयाँ भ्याट फिर्ताका लागि मल्होत्राले ठूला करदाता कार्यालयमा २०७५ जेठ १ गते निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमा ठूला करदाता कार्यालयले कुनै जवाफ दिएन।
ठूला करदाता कार्यालय मौन बसेपछि मल्होत्राले थप निर्यात गरेको दाबी गर्दै १४ करोड ४८ लाख ३९ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताका लागि २०७५ साउन ७ गते पुन: निवेदन दिए। उनले २०७४ साउन १ देखि जेठ मसान्तसम्म मोबाइल निर्यात गरेको दाबी गरी भ्याट फिर्ता माग गरेका हुन्।
मल्होत्राको कम्पनीले बारम्बार भ्याट फिर्ताका लागि ताकेता गर्न थालेपछि ठूला करदाता कार्यालय झस्कियो। आर्थिक ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शतप्रतिशत भ्याट फिर्ता लिने गलत मनासाय रहेको भन्दै फिर्ता गर्न नमिल्ने उसले जवाफ दियो। ठूला करदाता कार्यालयले ऐन बमोजिम ४० प्रतिशत कर फिर्ताको सुविधा उपयोग नगरी फर्जी काममार्फत शतप्रतिशत नै रकम फिर्ता लिन लागेको ठहर गरेको छ।
भ्याट फिर्ता लिन यसरी खडा गरिए कम्पनी
_x000D_ चीन, भियतनाम लगायत विभिन्न देशमा बनेका सामसुङ मोबाइल सेट सामसुङ इन्डिया इलेक्ट्रोनिक प्रालिबाट खरिद गरेको देखाउँदै मल्होत्राले ती सेट युएईको कृष्ण इन्टरनेसनल दुबईलाई बिक्री गरेको देखाएका छन्।
कृष्ण इन्टरनेसनलले सामसुङ इन्डिया इलेक्ट्रोनिक प्रालिबाट मोबाइल खरिद नगरी नेपालमा रहेको मल्होत्राको अर्को बिचौलिया कम्पनी हिमालयन इलेक्ट्रोनिक्सबाट खरिद गरेको पाएपछि ठूला करदाता कार्यालयले अनुसन्धान थाल्यो। सो अनुसन्धानले मल्होत्राले शतप्रतिशत भ्याट फिर्ता लिनका लागि बिचौलिया कम्पनी खडा गरेको पत्ता लगाएको हो। साथै सो अनुसन्धानबाट मल्होत्राले आफ्नै कर्मचारी डिल्लीराम खरेलको नाममा हिमालयन इलेक्ट्रोनिक्स दर्ता भएको फेला परेको छ।
त्यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले खरेलमाथि पनि अनुसन्धान थाल्यो। सो अनुसन्धानले एलाइड ट्रेड लिंक इन्टरनेसनल प्रालि नामको नयाँ कम्पनीसमेत रहेको पत्ता लगायो। खरेल यही कम्पनीमा कार्यरत रहेको पनि पुष्टि भयो।
थप अनुसन्धान गर्दा एलाइड पनि मल्होत्राकै रहेको रहस्य खुल्यो। खरेलले यही कम्पनीमार्फत तलब बुझ्दा रहेछन्।
ठूला करदाता कार्यालयले अनुसन्धानको दायरा बढाउँदै लगेपछि एलाइड र आइएमएसबीच पनि कारोबार रहेको देखियो। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा एलाइडले खरिद-बिक्री कारोबार नगरीकनै आइएमएसलाई ९ करोड ८४ लाख ९ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको ठूला करदाता कार्यालयले फेला पारेको थियो।
अनुसन्धानपछि मल्होत्राले शतप्रतिशत भ्याट फिर्ताका लागि थप दुई कम्पनी एलाइड र हिमालयन खडा गरेको पुष्टि भएको दाबी सर्बोच्चमा गरेको छ।
मल्होत्राको कम्पनी इन्टिग्रेटेड मोबिलिटीले पेस गरेको विवरण खोतल्दा ठूला करदाता कार्यालयले हिमालयन इलेक्ट्रोनिक्ससँग मोबाइल कारोबार नभएको फेला पार्यो। तर हिमालयनले नेपाल इनभेस्टमेन्ट बैंक न्युरोड शाखाबाट सन् २०१७ अक्टोबर २९ मा २० हजार अमेरिकी डलर मल्होत्राको कम्पनी इन्टिग्रेटेडलाई भुक्तानी गरेको भने देखियो। यसैगरी सन् २०१८ जनवरी ११ मा १५ सय अमेरिकी डलर इन्टिग्रेटेड मोबिलिटीको खातामा भुक्तानी गरेको पाइयो।
हिमालयन इलेक्ट्रोनिक्सले मल्होत्राको आइएमएस कम्पनीसँग मात्र मोबाइल खरिद-बिक्री गर्ने गरेको फेला परेको छ। तर, मल्होत्राको हिमालयनले कारोबार नै नभएको इन्टिग्रेटेड मोबिलिटीलाई रकम भुक्तानी गरेको देखिएपछि थप प्रश्न खडा भयो।
खरेलको हिमालयन इलेक्ट्रोनिक्समा मल्होत्राको अर्को कम्पनी इन्टिग्रेटेड मोबिलिटीका कर्मचारीहरु शैलेन्द्र शुक्ला, सञ्जय निरौला, पूर्णबहादुर र शिवशक्ति भन्ने व्यक्तिहरुले चेक कारोबार गर्ने गरेको पनि ठूला करदाता कार्यालयले फेला पर्यो। तर, करदाता सेवा कार्यालय बत्तीसपुतलीबाट भ्याट फिर्ता लिँदा खरेल सहभागी नभएको देखियो। भ्याट फिर्ता रकम इन्टिग्रेटेड मोबिलिटीका कर्मचारीले नै लाने गरेको भेटियो।
ठूला करदाताको यो अनुसन्धानले दीपक मल्होत्राले मोबाइल निर्यातका नाममा राज्यकोषको दोहन गर्दै शतप्रतिशत भ्याट फिर्ता लिन यो प्रपञ्च रचेको पुष्टि हुन्छ।
कुन कम्पनी कसको?
_x000D_ यो कम्पनी सामसुङ मोबाइलको नेपालको आधिकारिक बिक्रेता हो। यसमा दीपक मल्होत्राको ५१ प्रतिशत शेयर छ। यसबाहेक बाँकी शेयर उनकी श्रीमती सविता मल्होत्रा र छोरा दिकेश मल्होत्राको छ।
इन्टिग्रेटेड मोबिलिटी सोलुसन्स प्रालि
_x000D_ यो कम्पनी पूर्ण रुपमा दीपक मल्होत्राको स्वामित्वमा रहेको छ। यो कम्पनीले पनि नेपालमा सामसुङ मोबाइल खरिद-बिक्रीका लागि अनुमति लिएको छ।
एलाइड ट्रेड लिंक इन्टरनेसनल
_x000D_ यो कम्पनी दीपक मल्होत्राकै स्वामित्वमा छ। मल्होत्राले भ्याट छुटका लागि यो कम्पनीबाट आर्थिक कारोबार गर्ने गर्छन्।
_x000D_ यो कम्पनीमा डिल्लीराम खरेलको स्वामित्व रहे पनि उनी दीपक मल्होत्राकै एलाइड ट्रेड लिंक इन्टरनेसनलमा कार्यरत कर्मचारी हुन्।
मल्होत्रा किन सधैं विवादमा?
_x000D_ मल्होत्रा विभिन्न समय विवादमा आउने गरेका छन्। लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त हुँदा कार्कीसँग उनको व्यापारिक साझेदारी भएको आरोप लागेको थियो। बानेश्वर हाइटस्थित कार्कीको घर भाडामा लिएर उनले सामसुङ मोबाइलको गोदाम बनाएका थिए।
भूकम्पपीडितका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको पालमा समेत मल्होत्राको नाम जोडिएको थियो। सरकारले भारतबाट खरिद गरेको न्यून गुणस्तरको पालमा उनी जोडिएका थिए। तर, अख्तियार प्रमुख कार्की भएकाले पहुँचको भरमा उनीमाथि मुद्दा चलेन।
अन्य विभिन्न प्रकरणमा पनि मल्होत्राको नाम जोडिने गरेको छ। उनी सुन तस्करीको आरोपमा जेलमा रहेका व्यापारी विमल पोद्धारका व्यावसायिक साझेदार समेत हुन्।